မေးခွန်း Boeing 787-9
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #70 by Leeh12378
မင်္ဂလာပါ Rikooo အဖွဲ့သင့်ရဲ့အံ့သြဖွယ်က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းဖြစ်စေကိုယ်ကိုကိုယ်သို့မဟုတ်သင့် developer များမဆိုဖြစ်နိုင်ခြေကတော့ Boeing 787-9 အတွက်လည်းမရှိ။ ကျွန်မအနေနဲ့အသက်အဘို့အဦးတည်းကိုရှာကြပြီ, ငါပဲရသေးတဦးတည်းကိုမတှေ့နိုငျပါသညျ။ သင်ဤလေယာဉ်သည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲစဉ်းစားလျှင်ကိုယ်က download လုပ်ပါရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။
Lee က Homewood
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: regor, danielita
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #79 by Gh0stRider203
ကိုယ့်ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ငါကဒီမှာပေါ်တဦးတည်းကိုမမွငျခဲ့ဘူး, ဒါပေမဲ့အမှုအရာတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်မမည်နှင့်တဦးတည်းကဒီမှာပေါ်ပေါ်လာလျှင်, ငါသည် ya သိစေမယ်!
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #211 by Dariussssss
ကျနော်တို့တစ်နေရာတည်းမှာအားလုံး 787 ဗားရှင်းနဲ့အတူတစ်3ဗူးရှိသည်နိုင်လျှင်သူကတောင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ငါဒီမှာအဘို့အမေးရန်ဝံ့ပါလိမ့်မယ်။
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #216 by JanneAir15
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #220 by Gh0stRider203
JanneAir15 wrote: ဒါကအကောင်းတစ်စိတ်ကူးပါ!
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #222 by Twicerejected
ဒီတစ်ခါလည်းပိုကောင်းတဲ့မော်ဒယ်နှင့် VC ကိုအပ်လုဒ်တင်ထားသောအတူ 787 ရရန်ကြိုးစား
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: danwas
1 months ago7တစ်နှစ် - 1 months ago7တစ်နှစ် #895 by Josh13215
အစား 787 ၏အစစ်အမှန် 787 ယာဉ်နှင့်အတူလက်ရှိ 737 ကို update? ဘယ်လိုကော?
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်: 1 တစ်နှစ်7months ago နေဖြင့် Josh13215။ အကြောင်းပြချက်: grammer အမှား
0.485 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်